विकास संयन्त्रका लाजहरू
डा. रमेश पौडेल आइतवार, साउन २९, २०७४ 2265 पटक पढिएको
गएका १५-२० दिन नेपालको विकास राजनीतिका बारेमा खासगरी त्यसका संयन्त्रका बारेमा थुप्रै चर्चा भएका छन् । यी चर्चा कतिपय स्वाभाविक छन् र केही देखावटी र बनावटी छन्, जसले नेपालको विकास राजनीतिका बारेमा धज्जी उडाएका छन् र अलिकति देशका मै हँ भन्ने र देशको बारेमा गर्व गर्नेहरूका शिर निहुरिएका पनि छन् ।
पहिलो, आर्थिक वर्षको अन्तिम साता भएको 'पुँजीगत खर्चको' बारेमा भएका चर्चा । यो खर्च विगत एक दसकयता लक्षभन्दा धेरै कम भएको छ । जेजति भएका छन्, ती पनि उपलब्धिविहीन छन् र प्रभावकारिता प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो, देशमा विकासका लक्षहरू कहिल्यै भेटिँदैनन् र पूरा हुँदैनन् । एक वर्ष होइन, वर्षौंसम्म उस्तै खालका समस्या दोहोरिनु भनेको जिम्मेवार निकायलाई लाजै लाग्नुपर्ने विषय हो । यो विषयले थप लाजै लाग्ने गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता मात्र ६ महिनाको भन्दा बढी खर्च भएकाले चर्चा पायो । होलान्, यसका व्यावहारिक कारण पनि । तर त्योभन्दा बढी त हाम्रो विकास प्रशासनकै नियतमाथि नै प्रश्न छन् आम जनताका । किन यी खर्च समयमै र व्यवस्थित तरिकाले गरिँदैनन् ?
दोस्रो, 'प्रधानमन्त्रीको खाल्डाखुल्डी पुर्न दिइएको निर्देशन र त्यसको प्रगति ।' विकास प्रशासन कतिसम्म लाचार छ भने राजधानीका अधिकांश सडक धरापजस्तै बन्दा पनि यसका संयन्त्रहरू बेपर्वाह छन्, उनीहरूले कहींकतै उभिएर जवाफ दिनुपर्दैन । योजना बनाउनेहरू र नीतिनिर्माताहरू मस्त छन् आफ्नै स्वर्गमा । देशकै कार्यकारीले निर्देशन दिनुपर्ने, त्यो पनि कुनै विशेष कामको लागि होइन, उनीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम गर भनेर । नियमित गर्नुपर्ने काम गर भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवस्था आउँदा नेपाली मिडियामा भंगेरे अक्षरमा छापिने अवस्था आउने जुन खालको अवस्था विद्यमान छ, त्यसैले नै विकास प्रशासनलाई गिज्जाइरहेको छ । विडम्बना, अझै पनि उनीहरूले र दातृ निकायहरूले तारे होटेलमा गर्ने गोष्ठी सगर्व चलिरहेकै छन् ।
विकास प्रशासन कतिसम्म लाचार छ भने राजधानीका अधिकांश सडक धरापजस्तै बन्दा पनि यसका संयन्त्रहरू बेपर्वाह छन्, उनीहरूले कहींकतै उभिएर जवाफ दिनुपर्दैन ।
राजधानीमै सडकमा बगेर बालिकाको मृत्यु भएको छ । यसै परिवेशमा लाजै मानेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन केकति लागू भएका छन् ? त्यस्तो निर्देशन दिएको दुई साता पनि बित्न नपाउँदै रौतहटमा पनि सडकको खाल्डोमा डुबेर चार बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । त्यसैबाट थाहा हुन्छ, हाम्रो विकास संयन्त्रको हविगत । राजधानीमै सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थुप्रै उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले जनताले तिरेको राजस्वबाटै तलब खाइरहेका छन् । दुर्भाग्यवश भन्नैपर्ने भएको छ, व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरै होइन यो । यो त बरु देशकै बेइजत र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
तेस्रो, हालसम्मको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 'सरसफाइ' को बारेमा भएका चर्चा–परिचर्चा । हाम्रा नीतिनिर्माता देशलाई पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको चर्चा गर्दै तारे होटेलमा गोष्ठीमा सामेल भइरहेका हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले व्यवस्थापन, प्रविधि र प्रक्रिया सबै सिकून् भनेरै उनीहरूलाई प्रत्येक महिनाजस्तो विदेशमा राज्यले पनि पठाइरहेकै छ । तर उनीहरू के सिकेर फर्किन्छन्, कसैलाई थाहा छैन । उनीहरू विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सफाइ मजदुरले के गरेका छन्, कसरी काम गर्छन् भन्नेसम्म पनि जानकार राख्दैनन्, बरु आफ्नो विमानस्थलमा नाक छोप्दै भित्रिन्छन् ।
हाम्रो विमानस्थल फोहोर भएको नेपालका नीतिनिर्मातालाई भन्दा आफ्नै बाध्यता र परिस्थितिले बिदेसिएका नागरिकलाई बिझाउँछ । त्यसैकारण त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अधिकारीलाई भन्दा गैरआवासीय नेपालीलाई यो विमानस्थल सुधारको लागि तातो लाग्दै आएको छ । यात्रुले सामान्य सामान ओसार्ने ट्रलीको व्यवस्थापनसमेत यी अधिकारीहरूले गर्न सकेनन् र गैरआवासीय नेपालीले गरिदिएका थिए ।
पछिल्लोपटक अस्टे«लिया बस्ने खेम शर्माले विमानस्थलको फोहोर सफा गर्ने र यहाँको प्रशासनलाई केही सिकाएरै छोड्ने र उदाहरण पेस गर्ने अठोट गरे । परिणामस्वरूप सफाइको स्तर विदेशका राम्रो विमानस्थलको दाँजोमा पुर्यामएर कर्मथलो फर्किए । उनलाई सलाम छ । तर यसले उब्जाएको प्रश्न के हो भने, अर्बौं खर्चेर बनाएको हाम्रो विमानस्थल व्यवस्थापनको संयन्त्रभन्दा त खेम शर्माकोे एक्लो प्रयास प्रभावकारी भयो । यस उदाहरणबाट खेम शर्माप्रति त हामीले गर्व गरेकै छौं, तर त्योभन्दा बढी हीनताबोध त त्यसको जिम्मेवारी लिएकाहरूमा हुनुपर्ने हो ।
के राम्रा उदाहरणै छैनन् त ? छन्, तर धेरै कुरा नराम्रै भएकाले राम्रा पक्षहरू ओझेलमा परेका छन् । औंलामा गनेर राम्रा भन्न सकिने संस्थाहरूमा महाराजगन्जको मेडिकल क्याम्पस, पुल्चोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, बाँसबारीको गंगालाल हृदय केन्द्र र पछिल्लो समय राहदानी विभाग हुन् । सबैभन्दा बिग्रेका वा कमजोर व्यवस्थापनमा चलेर जनतालाई दुःख दिइरहेको र धेरै जनतासँग सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था र सडक विभागसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, शिक्षा कार्यालयहरू, मालपोत कार्यालयहरू र कर कार्यालयहरू हुन् । स्मरण रहोस्, यी बिग्रिएका भनिएकै कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री हुन नै धेरै नेताहरूको मरिहत्ते देखिन्छ । यो मरिहत्ते देखिन थालेको पनि धेरै दसक भए, तर यी कार्यालयमा आशातीत सुधार भएनन् ।
समस्या धेरै छन् । सबैको समीक्षा यहाँ सम्भव छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको त दिगो इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वकै अभाव हो । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ वा सुधार्छु भन्ने अठोट भएका व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउनु नै प्रमुख समस्या हो । संस्थाको नेतृत्वले कार्यकुशलता देखाउने अठोट र सानातिना कुरामा लोभ नगर्दा संस्थाहरू बनेका उदाहरण माथि उल्लिखित कार्यालय नै हुन् ।
अर्को समस्या भनेको सम्बन्धित कार्यालयहरूको आवश्यकतानुसारको खर्चको अधिकारको कमी पनि हो । उदाहरणको लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालयले कम्प्युटर अपरेटर बिदामा बसेको, कम्प्युटर बिग्रिएको, सर्वर डाउन भएको भन्ने जस्ता कारण देखाएर अहिले पनि कार्यालयबाहिर हजारौंको भीड लगाउँछ । यी वास्तवमै सामान्य समस्या हुन्, तर यिनै समस्या त्यहाँ प्रमुख कारक बनेका छन्, महिनैपिच्छे लाखौं सेवाग्राहीको कष्टको लागि ।
त्यसैगरी झन्झटिला प्रक्रिया थप समस्या हुन् । कर्मचारीको अनावश्यक धेरै तहका कारण एउटै कामको लागि पनि सेवाग्राहीले धेरैजना कर्मचारीसँग लाइन लाग्नुपर्ने खालका प्रक्रिया छन् । बढीमा दुईजनासम्म मात्र सम्पर्क गरेपछि काम फत्ते हुने गरी प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्दा धेरै समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र योग्य छ, हामीले एउटा प्रक्रिया पुर्याकएरै छानेका छौं । हामीले उनीहरूको विकासमा थुप्रै रकम खर्चिंदा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढेको होइन, घटेको पाइन्छ । हामीले प्रत्येक कर्मचारीलाई कसरी कुशल व्यवस्थापक बनाउन सकिन्छ भनेरै सोचेर मात्र यी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ कि ? कम्तीमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले व्यवस्थापनका आधारभूत ज्ञान र त्यसको प्रयोग अनिवार्य गराउन सक्दा हाम्रा सम्बन्धित कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालन हुन्थे कि ? जसले गर्दा हाम्रा विकास संयन्त्रका लाज हट्ने अवस्था आउँथ्यो कि ?
सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ नेपालमा कस्तो सार्वजनिक प्रसारण सेवा आवश्यक ?
सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ ३१ वर्षीय सरकार प्रमुख
सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ सिद्धान्तमा अडेको राजनीति
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 5846
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 29617
२० हजार घुससहित तीन नासु पक्राउ 4600